Echefula m-ọ bụghị mmanụ na-esi ísì ụtọ | Mgbasa ozi n'ahịa | AromaEasy
gosiri 4.92 nke 5 dabeere na 24 ahịa Fim
Echefula mkpụrụ osisi mmanụ nke E112 dị mkpa
SKU: E112 Categories: 100% Mkpa Mkpa Mmanụ, All Products
Oke Gburu Gburu Gburugburu M
Enwere ihe ndị sitere n'okike esitere na okooko osisi echefukarị-abụghị-okooko osisi.
Site na karama ahụ: okpukpo dị nro, ahịhịa na-esi ísì ụtọ
Ekwenyere na echefughi-m na-akwalite ihi ụra, o yikwara ka nyocha ọ̀ kwadoro nke ahụ.
24 reviews maka Echefula m-abụghị Mkpa mmanụ nke E112
Allie - Nwere ike 4, 2021
Ngwaahịa dị mma n'ezie!.
Hana - Nwere ike 3, 2021
Isi na-atọ ezigbo ụtọ ma ọ na-adị ogologo oge
Abraham - Nwere ike 2, 2021
Nnọọ silky na isi dị ezigbo mma.
Olile anya - Nwere ike 1, 2021
Ọ na-esi isi ... Ma na-eche ihe ịtụnanya na akpụkpọ m. M tinye ya na ude mmiri m ma ọ ka mma na 100%.
M ga -ebu ụzọ kwuo na enwere m obere nsogbu na iwu gara aga na onye na -ere ya dị ebube. Ha doziri okwu a ngwa ngwa na mmesapụ aka. Achọpụtala m ịtụ ịtụ ísì a ka ọ nye dị ka ụbọchị nne. Sì dị na mmanụ dị aghụghọ mana ọ na -atọ ụtọ nke ukwuu. Ọ na -arụ ọrụ ebube maka akpụkpọ ahụ gị. Ejibeghị m ya na ntutu m mana ọ dị mma maka ihu na aka. Ị gaghị emechu ihu ma ọ bụrụ na ị nwaa ya. Ana m akwado ngwaahịa a nke ukwuu.